Qeyb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda cusub ayaa ah in laga faa'iideysto saddexdaas arrimood ee kor ku xusan. Waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan ku darno dib u habeynta dhammaan bogagga maqan (3 qalad) WAANna ka faa'iideysan karnaa adeegsadayaashooda luqadaha badan ee raadinta adoo ku daray bogag la tarjumay. Qodobkaan, waxaan diirada saarayaa 404 arin qalad - maxaa yeelay waxay dhaawaceysaa qiimeynta mashiinkooda raadinta.
Xaashida Taasi waa u xun tahay waayo-aragnimada isticmaalaha iyo waxay u xun tahay waayo-aragnimada isticmaalayaasha mashiinka raadinta. Natiijo ahaan, mashiinka raadinta ayaa iska indha tiraya backlink… kaas oo ugu dambeyntii hoos u dhigaya awoodda iyo darajada bartaada.
Warka fiicani waxa weeye in backlinks-ka ku yaal goob awood leh aysan runti dhicin! Maaddaama aan u dhisnay bogag cusub macaamiisha isla markaana aan si habboon ugu wareejinnay xiriiriyeyaal duug ah waxyaabaha cusub… waxaan daawannay bogaggan oo cirka isku shareeraya xagga sare ee bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERP).
Haddii aad heysato hay'ad diiradda saareysa taraafikadaada raadinta dabiiciga ah (iyo WALBA websaydhada wakaaladda naqshadeynta waa inay ahaataa) ama haddii aad leedahay la-taliye SEO ah oo AANAN qaban shaqadan, waxaan aaminsanahay inay runti dayaceen shaqadooda. Mashiinnada raadintu waxay sii wadaan inay noqdaan isha ugu sarreysa ee taraafikada rajooyinka la xiriira iyadoo ujeedadu tahay wax iibsasho.
Marka, taas… haddii aad dib u naqshadeynayso bartaada, hubi inaad xisaab hubin iyo dib ugu wareejinta taraafikadaada bogagga cusub si habboon. Iyo, haddii aadan dib u qaabeyneyn goobtaada, waa inaad wali kormeertaa 404 bogag oo aad si sax ah ugu wareejisaa!
FIIRO GAAR AH: Haddii aadan u guurin bog cusub, waxaad si toos ah ugu boodi kartaa Tallaabada 5 ee geeddi-socodkan si aad si fudud ula socoto oo aad u weeciso 404 bog.
Darajada Xisaabta SEO Plugin ee 404 Monitor - Kani waa aalad aad u baahan tahay inaad inta badan isticmaasho… maahan oo keliya markaad bog furaysid. Waxaad u baahan doontaa inaad ku awoodsiiso Dashboardka Xisaabta Darajada.
Tusaale ahaan, waxaan bilownay goob loogu talagalay meelo badan Dhakhtarka ilkaha ee ku takhasusay caruurta leh caymiska Medicaid. Mid ka mid ah bogagga aan aqoonsannay ee lahaa dib-u-xirmooyinka aan la daboolin wuxuu ahaa maqaal, Ilkaha Ilmaha 101. Boggii hore ma lahayn maqaalka. Mashiinka 'Wayback' wuxuu kaliya lahaa qayb kooban. Marka markii aan bilawnay bogga cusub, waxaan hubinay inaan haysano maqaal dhameystiran, infographic, iyo muuqaallo bulsheed leh jihooyin laga soo diray URL-kii hore ilaa kan cusub.
Isla markii aan bilownay goobta, waxaan aragnay in gawaarida leexintu ay hadda u socdaan bogga cusub ee laga helay URL-yadii hore! Boggu wuxuu bilaabay inuu soo qaado qaar ka mid ah taraafikada wanaagsan iyo darajada sidoo kale. Ma aanan dhamayn, in kastoo.
Hadda, boggu waa # 8 boggooda ugu badan ee laga ganacsado barta cusub toddobaad gudihiis markii la bilaabay. Oo waxaa jiray 404 bog halkaas dhowr sano markasta oo qof yimaado! Waxay ahayd fursad weyn oo luntay oo aan la helin haddii aan ka taxaddarin inaan si sax ah u wareejino oo aan ula soconno xiriiro hore oo ka jiray webka ilaa boggooda.